9 matipi ekubudirira kugadzirisa musika wekutengesa mu2018 | Ehupfumi Zvemari
Kana isu tichifunga nezve fungidziro dzevanoongorora zvemari, 2018 harisi kuzove gore rakareruka kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Ehe izvo kubudirira kwemaitiro ako Haisi inshuwarisi, kure nazvo. Zvese fungidziro zvinoratidza kuti ichave izere nezvipingaidzo uye zvichanyanya kunetsa kugadzira profits mukushanda kunoitwa mumisika yemari. Kubva pane akajairika mamiriro, kungwara kunofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvakajairika zviito zvako. Nekuti mune chero mamiriro ezvinhu pane chinhu chimwe chakajeka uye ndiko kuti gore rino mikana yebhizinesi ichadzoka zvakare. Uye hapana chinhu chiri nani pane kuve wakagadzirira kutora mukana weiyi mamiriro.
Imwe yenjodzi dzekuvhiya kunoitwa gore rino nderekuti vanogadzira pasi pekugadziriswa kwakasimba. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti kuenzana kwenyika dzepasi rose kwave kukwira kwemakore mazhinji, pamwe kwakawandisa. Uye chero nguva ivo vanofanirwa gadzirisa chinzvimbo pakati pevatengi nevatengesi. Chinhu chakaipa pane zvaunofarira mumusika wemasheya hachisi chekuti izvi zvigadziriswe. Kana zvisiri, pane kudaro, shanduko yemafambiro inogadzirwa mune yakanyanya equices indices. Kuenda kubva bullish kune bearish. Kusvika padanho rekuti iwe unokwanisa kuzviona iwe wakasungirirwa munzvimbo dzako. Ndokunge, kure kwazvo nemitengo yako yekutenga.
Chimwe chinhu kuziva kuti chii chichaitika ne mareti emari. Zvese kudivi uye imwe yeAtlantic. Nekuti, zvinoenderana neiyi paramende yakakosha, mabhegi kubva kunenge kwese pasirese anofamba. Asi mune zvese zviitiko, uye kukubatsira kuronga yako investments kubva ikozvino zvichienda mberi, hapana zvirinani kupfuura akateedzana matipi pane izvo iwe zvaunofanirwa kuita. Nechinangwa chekuti iwe unogona kukwidziridza mashandiro zvinobudirira mukati memwedzi gumi nembiri iri mberi. Izvo hazvikubhadhare iwe zvakanyanya uye pachinzvimbo iwe unogona kuwana imwe bhenefiti mumafambiro aunoita kubva zvino zvichienda mberi.
1 Matipi: sarudza tsika
2 Siya zvimwe zvemari muaccount
3 Kusiyanisa mari
5 Tsvaga mikana mitsva
6 Kudzokorora muzvigadzirwa zvebhengi
7 Isa zvigadzirwa zvinopesana
8 Dziviriro kuchengetedzeka pamusika wemasheya
9 Chidhinha chinodzoka
Matipi: sarudza tsika
Hapana mubvunzo kuti imwe yekiyi yekusvika kwairi kuenda mune zvirinani mamiriro ichave yakavakirwa pakusarudza zvirinani tsika. Mupfungwa iyi, unofanirwa kusarudza iwo maitiro ane hunhu huri nani mumisika yemari. Kune zvikamu izvo zvinonyatsoita zvirinani kupfuura zvimwe. Nemisiyano mumakotesheni avo ayo anogona kumiririra mari yakawanda mukutarisa account yako. Apa ndipo paunofanirwa kutungamira zvipo zvako zvemari kubva zvino zvichienda mberi. Semuenzaniso, mumakambani emagetsi anonyanya kuzvidzivirira uye anokwanisa kwazvo kuchengetedza zvinzvimbo zvako mumusika wemasheya.
Imwe yekubhejera inomiririrwa nekuchengetedzeka uko kune yakakwira kwazvo mibairo yekubhadhara. Kana zvichikwanisika pamusoro pe5% uye senzira yekuva ne yakatarwa mari mukati meiyo kusiana. Neiyi nzira, iwe unenge uine yakagadziriswa uye yakavimbiswa mari gore rega. Zvisinei nekuti masheya anotengeswa sei pamisika yemari. Kwete chete kubva kumakambani emagetsi, asi mune mamwe matekiniki akadai semafuta, kutaurirana uye kunyangwe iro risinganzwisisike bhangi. Kana iwe ukasarudza zano iri, chokwadika, iwe unenge wakadzivirirwa zvakanyanya kubva pazviitiko zvakashata zvakanyanya zvehupfumi hwepasi rose. Iyi inzira yekuchengetedza zvakanyanya asi iyo inowanzo gara inobhadhara nenzira yemhedzisiro. Chero hupi hupfumi hwaunopa sewe mudiki uye wepakati investor: anozvidzivirira, ane hasha kana wepakati. Usapotsa uyu mukana unounzwa kwauri mu2018.
Siya zvimwe zvemari muaccount
Kana iwe uchida kuchengetedza yako nhaka, hapana zvirinani pane kugovera chete chikamu chemari yako gore rino. Chaizvoizvo icho chausingazodi mumwedzi inotevera. Ichave iri zano rinoshanda kwazvo kutarisana nekukanganisa kurasikirwa kunogona kuitwa nemabasa ako mumisika yemari. Uye kana zvichibvira inotsigirwa ne mira kurasikirwa kurongeka kuitira kuti vakaremara vasazoenda kune vakawanda panguva yechiitwa ichi changotanga. Chero chengetedzo chiyero chichava chidiki kutarisisa kune zvisina kunaka zviitiko izvo izvo musika wemasheya ungaburitse kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, kunakidzwa nekushomeka muakaundi yako yekutarisa kunokutendera iwe kuti uve nemikana mikuru yebhizinesi gore rino. Chinhu icho pasina mubvunzo chichaitika, zvisinei nekuti misika yezvemari inochinja sei. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha zve usaise mari yako yose kamwechete. Iwe unogona kutanga nekuvhiya kudiki zvishoma nezvishoma uye kana mamiriro acho akanaka uchave nenguva yekuwedzera nzvimbo dzako. Mupfungwa iyi, ndiwo achave misika iwo pachawo anokupa iwe nhungamiro dzekuita muna 2018.
Imwe kiyi yekugadzirisa mashandiro inoenderana nekusaisa pfungwa pane imwechete yemari nhumbi. Kana zvisiri, pane kudaro, zvakagoverwa pakati pezvakawanda. Kunyangwe kubva kune akasiyana zvigadzirwa zvemari. Kwete chete yemari inoshanduka, asiwo yeyakagadziriswa mari uye kunyangwe kubva dzimwe nzira. Neiyi nzira, iwe unenge uri muchinzvimbo chekuwedzera purofiti muzviitiko zvishoma zvakanakira misika yezvemari. Asi ichave zvakare iri chaiyo nzira yekudzora kurasikirwa kana mamiriro asiri izvo zvauri kuda.
Iyi nzira yekudyara inogona kuitiswa pasi pemaperesenti anonyanya kufanira kuprofile iwe yaunopa semudhara mudiki nepakati. Hazvishamisi kuti zvinokutendera kuti uve unochinjika mune ese mashandiro aunoita mukati megore idzva rekutengesa. Uye kuti iwe unogona kana kuendesa kune zvigadzirwa zvemari zvinozivikanwa senge mari yekudyara.
Iri zano rinokosheswa kwazvo kwenguva dzakaoma mumisika yemari. Hazvishamise kuti inokudzivirira kubva pamhedzisiro isingadiwe inogona kukutorera mari yakawanda mukushanda. Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kujairana nezviitiko zvese, kunyangwe zvakashata zvakanyanya. Nekuvandudzwa kunogara kuripo kwako kwekudyara portfolio. Iko iyo kuchinjika Inofanira kunge iri dhinomineta yechikamu chakanaka chezviitiko zvako. Nekunatsiridza mumhedzisiro yavo. Kune rimwe divi, kune mari dzekudyara dzinoitwa pasi pehunhu uhwu. Iko iwe pachako haufanire kuita chero chinhu, asi zvichaiswa kwauri nechichi chakakosha chigadzirwa.
Tsvaga mikana mitsva
Iyo inzvimbo yekukahadzika, iwe haufanire kurega kuita kwakanakisa kunokutungamira kuti iwe ugadzire hombe capital capital. Kune izvi, iwe unenge usina sarudzo asi kunyatsoteerera kushanduka kwemisika yemari yakasiyana. Kwete chete kuburikidza nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wekutengesa. Asi mune mamwe midhiya, senge simbi dzakakosha, mbishi zvigadzirwa uye kunyange zvimwe zvakajairika. Ivo vanokwanisa kukupa unopfuura mufaro mumwe pane imwe nhanho mumakore gumi nemaviri anotevera. Kuti iwe ugone kuzadzisa izvi zvinangwa, iwe unofanirwa kuve wakasununguka kwazvo kune chero rudzi rwekudyara. Kunyangwe neavo vausina kumbobvira washanda muhupenyu hwako.
Kudzokorora muzvigadzirwa zvebhengi
Pakati pegore rino huwandu hwezvibereko huchawedzera kudivi reAtlantic. Chinhu chaunogona kutora mukana nekuda kweiri nani purofiti iyo zvigadzirwa zvebhangi zvinokupa iwe. Pakati pavo, term deposits, promissory manotsi kana akakwira-goho maakaunzi, pakati pezvimwe zvakakosha. Nemahara iyo inogona kutosvika kune iyo nhanho dziri padhuze ne2%. Chikamu chausina kuwana mugore rino chaenda. Iko kwausingakwanise kupfuura 0,5% kufarira
Ukuwo, peripheral zvisungo iyo imwe sarudzo inobatsira kune vashoma uye vepakati varimi vane mbiri yekudzivirira. Ivo havazopa zvechokwadi inoshamisa inodzoka, asi zvirinani iwe unenge uine chengetedzo yakawanda yekuchengetedza capital pamwe neiyo shoma purofiti. Kusvika padanho rekuti inogona kuve imwe yemari inoshamisika anopfuura mumwe mushandisi. Izvi zvisungo zvinogona kugadziriswa zvega kana mune yekudyara mari fomati. Chero zvazvingaitika, usakanganwa kubheja uku kana iwe uchida kushandisa mashoma akanyarara mazuva muna 2018.
Isa zvigadzirwa zvinopesana
Iri zano rinotarisirwa kune vanoita zvehasha zvakanyanya. Nekuda kwemaonero asina kunaka kubva kune vamwe vanoongorora zvemari. Nenzira iyi, inverse zvigadzirwa zvinogona kuvandudza zvakanyanya bearish mamiriro mumisika yequity. Asi nekuda kwenjodzi huru yekuti mashandiro avo anosanganisira, zvinokurudzirwa kuti mafambiro aunoita kubva panguva ino zvishoma zvishoma. Nekuti iwe unogona zvakare kurasikirwa yakawanda ma euro munzira. Kwete pasina, ndiko kubheja kune njodzi pane kwatinokumbira iwe ikozvino.
Mukati memusika uno, hunhu hwakanyanya hunochengetedza huchave hunonyanya kufarira kudzivirira zvaunofarira. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo vanogadzikana mune avo makotesheni. Asi zvakare ndezvekuti ivo vanokupa iwe neyakanaka kwazvo mibairo. Iine avhareji kufarira kutenderedza 5% Uye kuti iwe uchave uine yakatarwa uye yakavimbiswa nzira gore rega. Zvisinei nekushanduka kwezviito zvako mumisika yemari. Muzviitiko zvese, ivo vanokupa iwe kudzoka kwakakwirira kupfuura izvo zvinopihwa nemari yemari kubva pamari yakatarwa.
Mushure memakore mazhinji ekumira ndiyo nguva yekuenda kunzvimbo yekuvaka. Mupfungwa iyi, zviyero zveSpanish zvakazara nezvikumbiro zvakakwana kuti ugutse zvaunoda. Kubva munzira dzakasiyana uye kuvhara dzakasiyana mitsara yebhizinesi. Iwo hunhu hunogona kutora mamiriro akanaka anounzwa kubato rezvidhinha. Iyi inogona kunge iri nguva yeku nzvimbo dzakavhurika mune chero ipi zvayo yemusika wemari zvirevo. Imwe yemabheti anobatsira kwazvo nemamiriro matsva ezvehupfumi kuSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » 9 matipi ekubudirira kugadzirisa musika wekutengesa muna 2018
Gonzalo Romero akadaro
Ndatenda zvikuru nezano. Ichokwadi ndechekuti ivo vari vekubatsira kukuru nekuti ini ndakatanga kutengesa nguva yadarika uye kunyangwe bhuroka rangu rakandibatsira kuzvidzidzisa, zvakanaka kudzidzisa ndakazvimiririra. Ndokusaka ndaigara ndichiverenga zvinyorwa zvakaita seizvi. Ndinovimba vanoramba vachitsikisa ruzivo rwakafanana.
Pindura Gonzalo Romero